Waxgarad Ku Shiray B/weyne Oo Kahor Yimid Shirka Ka Furmi Doona Jowhar – Goobjoog News
Waxgarad Ku Shiray B/weyne Oo Kahor Yimid Shirka Ka Furmi Doona Jowhar
Qaar kamid ugaasyada gobalka Hiiraan oo maanta shir ku yeeshay magaalada Baladweyne ayaa ka hadlay hadal shalay uu shaaciyay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo wakiilka IGAD ee Soomaaaliya kaasi oo ku aadan dib u billaabashada shirka Jowhar.
Ugaasyada Baladweyne ka hadlay ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee Wasiir Cabdiraxmaan Odawaa uu sheegay in dib loo furayo.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif, Ugaas Cali Ugaas Xasan iyo Ugaas Cali Ugaas Muxumed Ugaas Shafeec oo kamid ah ugaasyadii maanta ka hadlay shirka Baladweyne ayaa si isku mid ah uga soo horjeestay furitaanka shirka maamul u sameynta ee Jowhar.
“Annaga muddo siddeed bil ah ayaan tabanaynay oo dowladda ka dalbanay dib u heshiisiin in na loo qabto hase ahaatee waa la diiday, marka caqabaddii ka dhalataa haddii shirkaas la furo dowladda ayaa qaadanaysa oo masuul ka ah” ayuu yiri Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Ugaasyada ayaa sidoo kale ku baaqay in la tixgeliyo rabitaanka reer Hiiraan oo ay sheegeen in ay tahay waddo lagu heli karo maamul loo dhan yahay.
Shirka maamul u sameynta labadaan gobal ayaa waqtiyo badan dib u dhac uu ku yimid taasoo keentay cabashada odayaasha iyo qaarkood oo aan madasha shirka joogin.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa sheegay in bishaan September la qaban doono shirka maamul u sameynta ee labada gobal ee kala ah Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Oo Guddoomiyey Shir Ay Yeesheen Guddiga Qaban qaabada dib u heshiisiinta Galmudug iyo Safiirrada qaar
Shirka Golaha Wasiirada Oo Looga Hadlayo Arrimo Amniga Uu Kamid Yahay
Ugaas Maxamed Bashiir “Hala Daayo Farogelinta Lagu Hayo Duubabka 135-ka Ah”
Akhriso: Farmaajo Oo Furay Kalfadhiga 5aad Ee Golaha Shacabka, Kana Hadlay Arrimo Badan
Hiiovz jqiwjg cialis generic best price cialis price walmart
Gxeahj atagai brand cialis cialis over the counter
Maamulkii Isku Magacaabay West-land Oo Si Rasmi Ah Ugu Biiraya Hirshabelle
Suwhcw smrbyd canada pharmacy Ubbjj...
Linseu mmovpy rx pharmacy Thhjg...
Dvxmfe owfimc online canadian pharmacy Skygd...
Cegqtg svlsdm canadian online pharmacy Myyyx...
viagra for men viagra pills...